MacBook nwere obere-Ikanam ihuenyo agaghị abịa ruo mgbe 2022 | Esi m mac
Ụlọ Ignatius | | MacBook, Noticias
Site na mwepụta nke 12,9-anụ ọhịa iPad Pro na obere-ikanam ihuenyo, ọtụtụ ndị ọrụ na-eche ọbịbịa nke teknụzụ a na ihuenyo nke MacBook si otú ahụ na-akwado. ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke asịrị ndị rụtụrụla na nke a. Agbanyeghị, akụkọ kachasị ọhụrụ gbasara ọkwa MacBook ọhụrụ nwere obere ngosi ngosi ngosi ọkụ na-esote afọ ọzọ.
DigiTimes Dabere na, atụmatụ Apple iji mejuputa obere ngosi ọkụ na ọkwa MacBook ọhụrụ ga-egbu oge. O doro anya, ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya kpebiri igbu oge mmejuputa iwu a. Igwe a na-akpọ anyị òkù ka anyị nwee akụkọ ọhụrụ a ga-ebipụta n'ime izu a ebe ị ga-enyekwu data.
Agbanyeghị na DigiTimes abụghị usoro a na-ahụ anya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na amụma ya, oge a ka ọ bụ kwekọọ na nke Nikkei dere na mbido afọ a, onye kwuru na atụmatụ Apple iji malite ọhụrụ MacBook na obere ihuenyo LED nwere obere oge, ma na-ekwughị ụbọchị ọ bụla.
Apple ezuola ịmalite mmepụta nke ụdị ọhụrụ a maka June na-abịa iji malite ngwaọrụ na ahịa na mgbụsị akwụkwọ wee jiri otu n'ime ihe dị iche iche Apple na-ezube ijide na nkeji iri na ise nke afọ.
Mkpebi igbu oge nhapụ a nwere ike ịbụ metụtara ihe ndị na-efu efu nke ụlọ ọrụ niile na-eche ihu na nke na-emetụta ndị na-emepụta ụgbọ ala na ndị nrụpụta ekwentị.
Anyị amaghị ihe kpatara dugara Apple mepee teknụzụ nwere obere ọkụ na iPad Pro 2021 nke 12,9 sentimita asatọ kama na nke ọhụrụ MacBook nso ịmata enweghị akụrụngwa, a enweghị mmiri na dị ka dị iche iche na-akọ, ga-adịgide nile 2022, n'ihi ya, ọ ga-emetụta ọhụrụ iPhone 13 nso.
N'ezie, Microsoft na Sony ekwuputala na ruo 2022 n'ihe banyere Microsoft, ọ gaghị adị mfe ijide Xbox Series X ọhụrụ. N'ihe banyere Sony, atụmatụ mbu gosiri na ọ gaghị abụ ruo 2023 mgbe mmepụta nke PlayStation 5 ga-aga n'ihu.
Iche echiche nke imegharị ihe MacBook
Ihe doro anya bụ na abụghị ezigbo oge iji mee ka MacBook ochie gị dị ọhụrụ ọ bụrụhaala na ịchọrọ ichere ịnụ ụtọ ọmarịcha teknụzụ nwere obere ọkụ na kọmputa gị. O yikarịrị ka Apple ọ ga-emegharị ihe a n'ogologo 2021, mana ọ gaghị ejikọ teknụzụ a na ihuenyo ahụ, yabụ ọ bụrụ na ị na-eche ịgbanwe ngwá ọrụ, ị kwesịrị ichere obere oge ma ọ bụrụ na ị gbatịkwuo ndụ bara uru nke MacBook site afọ ole na ole.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » MacBooks nwere obere ihuenyo LED agaghị abịa ruo mgbe 2022
Trailergbọ ala izizi nke usoro Prince Harry dị ugbu a
New Beats ekweisi na anya: Beats Studio Buds